Faa’iidooyinka Jimicsiga Quraacda Ka Hor - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA CAAFIMAADKA Faa’iidooyinka Jimicsiga Quraacda Ka Hor
Faa’iidooyinka Jimicsiga Quraacda Ka Hor
Jimicsiga la sameeyo quraacda ka hor ayaa la cadeeyay inuu jidhka siiyo awood iyo firfircooni dheeraad ah, taasi oo u suurtagelisa qofka inuu shaqada badan u adkaysto, iyo inay ka ilaaliso daalka iyo wareerka jidhka ku dhaca wakhtiga shaqada.
Mac-hada ku yaalla dalka Ingiriiska oo cilmi baadhis ku sameeyay 30 qof oo jimicsi sameeya ka hor quraacda ayaa muujisay in jidhkoodu uu gubay sonkortii iyo weliba awood u yeeshay inay sheqeeyaan wakhti badan iyagoon aan dareemin daal iyo caajis midna.
Waxa kale oo daraasadda ay ku samaysay baadhis dadka jimicsiga sameeya quraacada ka dib kuwaasi oo la ogaaday in miisaankoodu kordho isla markaana aanu wax isbeedel ahi ku dhicin sonkorta jidhkooda.
Sanadkii 2020 daraaasad laga sameeyay jaamacad ku taalla dalkaasi oo lagu magacaabo Bath University ayaa isla warbixintan soo saartay. Waxaana daraasaddu dadka ku dhiirgelisay inay sameeyaan jimicsi ka hor quraacda.
Previous articleCayayaan yar Oo Xanibay Safar Muhim Ah
Next articleKamarad Lagu Ogaanayo Xaalada Ardaygu Ku Jiro Wakhtiga Kalaaska